AdPushup: mifehy sy manatsara ny lamin'ny doka | Martech Zone
AdPushup: mifehy ary manatsara ny lamin'ny doka
Alahady Oktobra 23, 2016 Alahady Oktobra 23, 2016 Douglas Karr
Amin'ny maha-mpitory anao, iray amin'ireo fanapahan-kevitra sarotra indrindra amin'ny fikirakirana vola ny tranokalanao dia ny fifandanjana eo amin'ny fampitomboana ny vola miditra na ny fanimbana ny zavatra niainan'ny mpampiasa anao. Sahirana ihany koa izahay amin'ity fandanjana ity - mampiditra doka lasibatra dinika izay mifandraika amin'ny mpampiasa. Ny fanantenanay dia ny hanitaran'ny dokam-barotra ny atiny amin'ny fanomezana vokatra na serivisy mety hanampy.
Ny lafy ratsy dia mazava ho azy fa ny mpitsidika ny tranonkala dia manomboka tsy miraharaha ireo doka fotsiny. AdPushup, rafitra iray hifehezana sy hanatsarana ny doka ho an'ny doka, no miantso an'io fahajambana amin'ny banner. AdPushup dia miharo tsy mitongilana amin'ny tranokalanao ary mamela anao hamorona toerana fanampiny ho an'ny doka misy anao, ao anatin'izany ny atiny anatiny.
AdPushup manome sehatra ahafahanao manatsara ny habeny, ny loko, ny karazany ary ny fametrahana ny doka misy anao. Mampiasa ny fianarana milina ny rafitra mba hampihenana ny filàna fidirana an-tsehatra sy ny fanoloran-tena amin'ny fotoana, sady manatsara ny fametrahana ny doka mba hampitomboana ny vola miditra.
Ny endri-javatra AdPushup dia misy:
Fanatsarana ny doka - Mamorona andrana fananganana doka ary manatsara ny haben'ny doka, ny fametrahana azy, ny karazany ary ny loko.
Teknolojia fanatsarana fiara mandeha ho azy - Fizahana fanatsarana fiara ao anaty atiny ary ampidiro am-pahalalana ny doka amin'ny atiny nefa tsy misy fiatraikany amin'ny UX.
Fitantanana doka hita maso - Mampiasà tonian-dahatsoratra hita maso sy mifantina hifehezana ireo fananana doka maro ary hametrahana andrana tsy misy kaody.
Fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa - Ampitomboy ny vola miditra nefa tsy manimba ny traikefan'ny mpitsidika ny tranokalanao na manova ny modely famolavolana azy.
Masinina fanatsarana mitohy manan-tsaina - Ny fianarana milina dia ahafahan'ny rafitra mianatra sy mampifanaraka ny tenany amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ny mpitsidika mba hanehoana ny firafitra doka mety indrindra hisarika ny sain'izy ireo.
Segmentation sy personalization - Mamorona mpijery sy fizarana ho azy manokana ho an'ny fanarahana manokana ny firafitry ny doka hanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika.
Analytics sy Tatitra - Mijanona ho vaovao hatrany amin'ny zava-bitan'ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny valiny amin'ny alalany Analytics, ary tatitra manokana.
Fanatsarana ny doka - Navoaka haingana ny doka tamin'ny alàlan'ny tamba-jotra fandefasana fikirakirana Geo nozaraina izay nametraka enta-mavesatra faran'izay kely amin'ny mpizara anao.
Fampidirana miaraka amin'i Google AdSense / AdX - Fampiraisana tsy misy tomika miaraka Google AdSense ary DoubleClick Ad Exchange (AdX) izay ahafahanao manomboka amin'ny tsindry tokana.
Fanarahan-dalàna momba ny politika Google AdSense - Ny doka nohamarininao dia alefa amin'ny alàlan'ny tamba-jotra fandefasana fikirakirana Geo zaraina izay mametraka enta-mavesatra kely indrindra amin'ny mpizara anao.
Angamba ny zavatra mahaliana indrindra momba AdPushup dia ny hoe ny vidiny dia mifototra amin'ny fizarana fidiram-bola miaraka amin'ny fanoloran-tena farafaharatsiny.
Tags: fanatsarana ny fandefasana dokafisehon'ny dokafanatsarana ny dokatatitra momba ny fisehon'ny dokafanatsarana dokaadpushupadxfitantanana doka amin'ny sora-baventytatitra momba ny dokabanner adsfanatsarana fanevafanamafisam-peo amin'ny bannerfizarana fanevaDoubleclickgoogle adsenseFanarahan-dalàna momba ny politika Google AdSensefanatsarana ny traikefan'ny mpampiasafitantanana doka hita maso